Rajoelina - Ravatomanga : Nitsentsitra ny Air Madagascar -
AccueilRaharaham-pirenenaRajoelina – Ravatomanga : Nitsentsitra ny Air Madagascar
Nofatoran’ny fitiavam-bola sy fahefana tamin’ny rojo vy i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, ka voahozona hiara-dia. Tsy ny fanondranana « bois de rose » nandritra ny Tetezamita irery ihany, fa niarahan’izy ireo avokoa ny raharaha maloto rehetra teto nandritra iny fitondrana HAT iny. Iray amin’ireo orinasa nahita loza tamin’izany ny Air Madagascar…
Nihazakazahan’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga nofehezina avokoa ireo orinasam-panjakana goavana rehetra mampidi-bola, raha vao tonga teo amin’ny fahefana izy ireo, taorian’ny fanonganam-panjakana ny taona 2009. Notendrena ho mpikambana tao amin’ny filankevi-pitantanan’ireny orinasam-panjakana goavana ireny hatrany i Mamy Ravatomanga, mba nahafahan’izy roalahy nanaram-po tamin’ny fitsentsefana. Iray tamin’ireny ny kaompania Air Madagascar, izay natonton’izy ireo tamin’ny tany mihitsy nanamorana ny paikady maloto nitsentsefana izany kaompaniam-pitaterana an’habakabaka malagasy izany. 470 Miliara Iraimbilanja ny fatiantoky ny kaompania Air Madagascar ny taona 2011, 250 Miliara Irambilanja kosa izany ny taona 2012. Natao hatramin’ny farany mihitsy, izay tsy nivoahan’ity kaompania ity tao anatin’ny lisitra B, nanamarinana ny fanofana ireny Airbus ireny. Efa taty amin’ny volana Jona 2016 vao tafavoaka tao anatin’io lisitra B io ny Air Madagascar.
Tao anaty manjavozavo tanteraka no nanaovana ny fifanarahana, ka nahatonga ilay teratany kanadiana, tale jeneralin’ny Air Madagascar, Gilles Filiatreault, nampitsahatra avy hatrany ny fanofana ireo fiaramanidina Airbus, izay tsy nitondrana tombontsoa velively afa-tsy ho an’ny paosin’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Ny famarotana ny kaompania tamin’i Mamy Ravatomanga moa no tena tanjona tamin’izany fanapotehana ny Air Madagascar izany, saingy naleon’ity farany nividy ny kaompania TOA an’ilay teratany karana tamin’ny fomba rehetra.
Rehefa miresaka izay tontolon’ny fiaramanidina izay hatrany isika, dia tsara ihany koa ny mampatsiahy fa mbola i Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina hatrany no tao ambadiky ny famarotana ny fiaramanidina Air Force One II, novidiana 60 Tapitrisa Dolara tamin’ny volam-panjakana, nambara fa namidy 25 Tapitrisa Dolara ny taona 2012. Nambaran’ity “jeune putschiste” ity tamin’izany moa fa hividianana vary ny vola azo, tsy hita nanjavonana anefa izany vola be izany hatramin’ny nialany teo amin’ny fitondrana.
Vao misy resa-bola, na raharaha maloto nandritra ny Tetezamita dia voatonona hatrany i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, ary tena nampiteny ny anarany mihitsy izy roalahy, teo anelanelan’ny taona 2009-2012. Hoentina amintsika amin’ny manaraka eto ny paika maloto mikasika ilay fandoavan’ny JIRAMA vola mitentina 15 Miliara ho an’i Mamy Ravatomanga, raharaha eny am-pelatanan’ny BIANCO. Voafatotry ny fitiavam-bola sy ny fahefana tokoa izy roalahy, ka izao mbola mieritreritra ny hiverina eo amin’ny fahefana izao indray.